FuturePoints စျေး - အွန်လိုင်း FTP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FuturePoints (FTP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FuturePoints (FTP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FuturePoints ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
FTP – FuturePoints
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FuturePoints တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FuturePoints များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FuturePointsFTP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$8.29FuturePointsFTP သို့ ယူရိုEUR€7.03FuturePointsFTP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£6.35FuturePointsFTP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.7.56FuturePointsFTP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr74.8FuturePointsFTP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.52.36FuturePointsFTP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč184.96FuturePointsFTP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł31.02FuturePointsFTP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$11.09FuturePointsFTP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$11.57FuturePointsFTP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$185.49FuturePointsFTP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$64.21FuturePointsFTP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$45.04FuturePointsFTP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹621.59FuturePointsFTP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1399.21FuturePointsFTP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$11.37FuturePointsFTP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$12.55FuturePointsFTP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿258.68FuturePointsFTP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥57.73FuturePointsFTP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥877.71FuturePointsFTP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩9852.32FuturePointsFTP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3205.11FuturePointsFTP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽610.71FuturePointsFTP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴229.7
FuturePointsFTP သို့ BitcoinBTC0.000707 FuturePointsFTP သို့ EthereumETH0.021 FuturePointsFTP သို့ LitecoinLTC0.143 FuturePointsFTP သို့ DigitalCashDASH0.0849 FuturePointsFTP သို့ MoneroXMR0.0888 FuturePointsFTP သို့ NxtNXT579.95 FuturePointsFTP သို့ Ethereum ClassicETC1.19 FuturePointsFTP သို့ DogecoinDOGE2439.85 FuturePointsFTP သို့ ZCashZEC0.0869 FuturePointsFTP သို့ BitsharesBTS317.23 FuturePointsFTP သို့ DigiByteDGB285.25 FuturePointsFTP သို့ RippleXRP28.07 FuturePointsFTP သို့ BitcoinDarkBTCD0.282 FuturePointsFTP သို့ PeerCoinPPC27.6 FuturePointsFTP သို့ CraigsCoinCRAIG3723.53 FuturePointsFTP သို့ BitstakeXBS348.55 FuturePointsFTP သို့ PayCoinXPY142.67 FuturePointsFTP သို့ ProsperCoinPRC1025.35 FuturePointsFTP သို့ YbCoinYBC0.00439 FuturePointsFTP သို့ DarkKushDANK2620.22 FuturePointsFTP သို့ GiveCoinGIVE17685.92 FuturePointsFTP သို့ KoboCoinKOBO1833.22 FuturePointsFTP သို့ DarkTokenDT7.63 FuturePointsFTP သို့ CETUS CoinCETI23582.27
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 04:35:02 +0000.